C/fatax Geeseey: Hada waxaa yaala gudaha Qansaxdheere meydadka 14 ka tirsan Al Shabab
Dagaal faraha loogaga gubtay ayaa duhurnimadi maanta ka dhacay degmada Qansaxdheere ee gobolka Bay kaasi oo dhexmaray ciidamada dowlada iyo kuwa Al Shabab.
Dagaalka oo sidoo kale ay qeyb ka ahaayeen ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Bay ayaa la sheegay inuu ka danbeeyey ka gadaal marki ay Al Shabaab weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowlada ku lahaayeen halkaasi.
Gudoomiyaha Gobolka Bay, C/fataax Geeseey oo goor dhaweyd la hadlay qaar ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku jibeen xoogagi soo weeraray, isaga oo xaqiijiyey in hada ay hayaan meydadka ilaa iy 14 ka tirsan Al Shabaab sida uu sheegtay.
“Kooxdi Al Shabab Al Qacida ayaa marki lagu guda jiray salaada duhur soo weeraray degmada Qansaxdheere, marki hore waxay isku dayeen in ay soo jiiraan ciidanka joogay halka loo yaqaano Howlaha Guud ee jiida hore, kadib waxay isku dayeen in ay la dagaalamaan ciidami dhanka koonfureed ee magaalada difaaca uga jiray markaas ayaa dhinacyada loogaga yimid, waxa hada laamiga magaalada yaala 7 meel ah, banaankana 6 laa 7 kale,” sidaa waxaa yiri gudoomiyaha gobolka Bay C/fitaax Geeseey.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhinaca Al Shabaab, balse war lagu qoray bogooda internetka ayaa lagu sheegay in dagaalkaasi laga gaaray hadafki laga lahaa.